Mifaniliha indray e ! • AoRaha
Mifaniliha indray e !
Tsy vitan’ny mazia mazia ny fahazoana fandresena, na inona na inona hatao. Raha te handresy dia mila fiomanana, fandraisana andraikitra, fikelezana aina ary fandavan-tena. Dia tena mbola tsy ho afaka amintsika Malagasy mihitsy ny hoe « efa mby an-koditra ny loza vao manao izay ho afany », raha ny zava-misy ankehitriny no atao indray mijery. Raha tsy hijery afa-tsy ny Barea sy ny fanomanantenany isika, amin’izao roa volana mialoha ny lalao hihaonana amin’i Côte d’Ivoire izao dia tena rariny raha himenomenona ny olona.
Rehefa hamoaka vola na rehefa hikarakara dia samy milaza fa tsy tompon’andraikitra avokoa na ihany koa na mifampiandriandry sy mifanilikilika eny. Mailaka ery anefa misehoseho rehefa tojo fandresena. Enga anie tsy hisy ny faharesena fa, angamba, tsy hisy sahy hilaza fa avy amiko no nahatonga izany. Io fifanilihana io ihany anefa no efa tsy nampahomby antsika hatramin’izay.
Mahavelom-bolo aloha, raha ny filazan’ny fanjakana malagasy fa « vonona izy ireo hisahana ny fandaniana manomboka amin’ny fanomanana hatramin’ny lalao ». Na izany aza anefa dia tokony samy handray ny andraikiny avokoa ny rehetra, manomboka any amin’ny mpilalao, mpanazatra sy teknisiana, federasiona, eny hatramin’ny mpijery. Dia mifaniliha indray àry moa hibabentsika ny taolam-be tsy mitapaka.
Akisaho ny fanabeazana
Samy man…adala !